इजरायली ट्यांकरमा भएको हमलामा इरानको हात छ : इजरायल - NepalKhoj
इजरायली ट्यांकरमा भएको हमलामा इरानको हात छ : इजरायल
नेपालखोज २०७८ साउन १८ गते १३:१६
जेरुसेलम । इजरायली प्रधानमन्त्री नाफ्ताली बेनेटले ओमानी तटमा रहेको इजरायलद्वारा सञ्चालित तेल ट्याङ्करमा दुई जनाको ज्यान जानेगरी भएको हमलामा इरानको हात रहेको बताएका छन् ।
उनले इरान इजरायलको शत्रु रहेको आरोप लगाउँदै उक्त घटनामा इरानको हात रहेको प्रमाण आफूहरुसँग रहेको दाबी पनि गरेका छन्, उनको यो भनाइपछि उता अमेरिका र बेलायतले पनि इरानको हात रहेको हुनसक्ने वक्तव्य दिएका छन् ।
बेलायत र अमेरिकाले इरानको हात रहेको आफूहरूलाई पनि विश्वास लागेको बताएका थिए । अमेरिका र बेलायतले यस घटना अन्तर्राष्ट्रिय कानुनकोविपरीत रहेको पनि बताएका छन् ।
यता इरानले भने सो घटनामा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेको छ । इजरायलका प्रधानमन्त्री बेनेटले यसबारेमा चेतावनी दिँदै इरानलाई कसरी जवाफ दिनुपर्छ भन्ने कुरा आफूलाई थाहा भएको भनेपछि यता इरानले यस घटनामा आफ्नो हात नरहेको भनी स्पष्ट गरेको छ ।
तेहरानले यसलाई आधारहीन आरोप भनेको छ । उक्त ट्यांकरमा भएको हमला इजरायल र इरानबीचको अघोषितरुपमा एक किसिमको तनाव बढाउने पछिल्लो घटनाका रूपमा आएको विदेशी समुदायले दाबी गरेका छन् । गएको मार्चदेखि इरान र इजरायलले सञ्चालन गर्दै आएका कैयौं पानीजहाजमा आक्रमण भएको देखिएको छ ।
पछिल्लो पटक भने इजरायलको स्वामित्वको एक कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको एमभी मर्सर स्ट्रिट नामक ट्याङ्करमा गत बिहीबार आक्रमण भएको थियो । ओमानी तटमा सो ट्यांकरमामाथि आक्रमण भएको थियो ।
त्यस आक्रमणमा परेर दुई जनाको ज्यान पनि गएको थियो । ज्यान जानेमा एक जना ब्रिटिश र एक जना रुमेनियाली नागरिक रहेका छन् । त्यस हमलामा अहिलेसम्म कसैले पनि जिम्मेवारी लिएको छैन । रासस
अफगानिस्तानमा तालिबान आउनु आन्तरिक विषय : परराष्ट्रमन्त्री
थुनामा रहेकाको मुद्दा मिलाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने पक्राउ
परराष्ट्रमन्त्री खड्काले आज यूएनको महासभालाई सम्बोधन गर्ने
शंकास्पद कुकुरले टोकेमा के गर्ने ?
अंग्रेजी फिल्म प्रदर्शन गर्दै हल खुल्ने !
मेघ गर्जन र चट्याङसहित वर्षा !